ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 07/25/12
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ယနေ့ (25.7.2012 )လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးမှု သတင်း
သတင်း ... ပြည်သူ့လွှတ်တော်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:04 PM No comments:
ဒီငြိမ်းလင်း ပေးပို့ ပါတယ်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:52 PM No comments:
ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ၂၄ နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ နှစ်ပါတ်လည်အခမ်းအနားကို အောက်ပါ အစီအစဉ် ၂ ရပ်ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါကြောင်း။
နေ့ရက်။ ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
အချိန်။ ။ နေ့လည် ၁ နာရီ စုရပ်၊ ၂ နာရီ အခမ်းအနားစတင်မည်၊ ၂း၃၀ စတင်ထွက်ခွာမည်။
နေရာ။ ။ Gotanda ဘူတာ အနီး၊ Minami Gotanda ပန်းခြံ။
၂။ ၈၈၈၈ နေ့ အထိမ်းအမှတ် နိုင်ငံရေး စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ။
နေ့ရက်။ ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ (တနင်္ဂနွေနေ့)။
အချိန် ။ ။ ညနေ ၆ နာရီ မှ ည ၉ နာရီအထိ။
နေရာ။ ။ Otsuka ဘူတာ၊ Minami Otsuka hall။
စာတမ်းဖတ်ကြားတင်သွင်းလိုသူ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် တင်သွင်းမည့် စာတမ်းအရည်အတွက်၊ အချိန် စသဖြင့် ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်း မှုးများ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ ကြိုတင်ဆက်သွယ် စာရင်းပေးပို့ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
တာဝန်ခံကျင်းပသော အဖွဲ့အစည်း (၁) မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကွန်ယက်/ Network for Democracy in Burma (NDB)
(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေ၊ ဂျပန်ဌာနခွဲ/ NLD (LA)-JB
ဆက်သွယ်ရန်။ ဦးသန်းဆွေ၊ ဦးကျော်ကျော်စိုး၊ ဦးလှဟန်။ဦးသောင်းမြင့်ဦး၊ ဦးမိုင်ကျော်ဦး၊ ဦးဇော်မင်းခိုင်၊ ဦးမြင့်ဆွေ၊
၀၉၀ ၄၉၆၄ ၉၇၁၈။ ၀၉၀ ၆၀၃၁ ၄၃၉၄။ ၀၉၀ ၆၁၆၈ ၂၀၉၅။ ၀၉၀ ၆၀၄၀ ၈၂၈၂။ ၀၉၀ ၉၈၃၁ ၇၁၉၂။ ၀၉၀ ၆၀၂၅ ၄၆၂၉။ ၀၈၀ ၄၀၀၅ ၇၀၉၈
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:29 PM No comments:
လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် သက်တမ်းရင့် အပင်များလဲပြို
July 25, 2012 အိမ့်သံစဉ်
ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေ့ ၃ နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့တွင် မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့လို့ ဗိုလ်အောင်ကျော် လမ်း အောက် ဘက်ဘလောက်ရှိ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရုံးချုပ် အရှေ့ရှိ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံး မှန်များ ကွဲခဲ့ပါတယ်တဲ့။
သက်တမ်းရင့် အပင်တွေလဲ ပြိုလဲ သွားခဲ့ပြီး ဆက်သွယ်ရေးရုံးချုပ်ရှေ့မှာ ရပ်ထားတဲ့ ကား ၃ စီးကတော့ ကျိုးကျသွားတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ ပိလို ပျက်စီးသွားပါသတဲ့။
ဖြစ်ပွားရာ နေရာကိုတော့ မြိုတော် စည်ပင်က တာဝန်ရှိသူတွေက လာရောက် ရှင်းလင်းသွားပါတယ်လို့ ကြေးမုံ သတင်းစာ မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ မျက်မြင်သက်သေများပြောပြတာကတော့ အခုလို လေပြင်းတိုက် သစ်ပင်ကြီး တွေလဲတာကို နာဂစ်တုန်းက တစ်ခါနဲ့ အခုတစ်ခါသာ မြင်ဖူးတာလို့လဲပြော ပါတယ်။
ထူးခြားမှုကတော့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ သက်တမ်းရင့် အပင်တွေပြိုလဲတိုင်း လမ်းမတွေပေါ်ကိုသာ ပြိုလဲတာဖြစ်ပြီး လမ်းဘေး ၀ဲ ယာက လူနေတိုက်ခန်းတွေကို မပိဘဲ အလျားလိုက်လဲတာများပါတယ်တဲ့။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:45 PM No comments:
ပင်လုံကဲ့သို့သော တိုင်း ရင်းသား ညီလာခံ ကြီး တစ်ခု ကျင်းပဖို့
တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး အင်အား စုတွေ က အာဏာပိုင် တွေကို
တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကလည်း ၂၀၁၅
မတိုင်ခင်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင် မယ်လို့ ထားတဲ့ စကားတွေနဲ့ အညီ
ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံ
မှုတွေ ခြေလှမ်း ကျဲကျဲ နဲ့ ပြု လုပ်နေတာ ကိုလည်း တွေ့ လာရပါတယ်။ ၁၉၉၀
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ တိုင်းရင်းသား ပါတီများနှင့် တိုင်းရင်းသား
စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ (တစည) အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး ပါတီ ၁၄ ခု တို့ အစိုးရ
ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
VOA ရဲ့ ရန်ကုန် သတင်းထောက် ကိုရဲကျော်အောင် သတင်းပေးပို့ ထား ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ ပင်လုံကဲ့သို့သော ညီလာခံကြီး တစ်ခုကို
ကျင်းပ ပေးဖို့ စစ်မှန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား အားလုံး ပါဝင်တဲ့ ညီလာခံတစ်ရပ်
ကျင်းပပေး ဖို့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ တိုင်းရင်းသား ပါတီများနှင့်
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ(တစည) အပါအ၀င် နိုင်ငံ ရေး ပါတီ ၁၄ ခု
တို့ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ နဲ့ တွေ့ ဆုံစဉ် မှာ တောင်း
ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီ ၁၄ ပါတီ ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန် က
တွေ့ဆုံမယ်လို့ ပြောကြားလာကြောင်း အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ နှင့် တွေ့
ဆုံခဲ့တဲ့ ဇိုမီး နေရှင်နယ် ကွန်ဂရက် မှ ပြော ရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦး
၀မ်ခမ်းလျှမ် က ပြော ပါတယ်။
၂၀၁၅ မတိုင်မီ ပင်လုံကဲ့သို့သော ညီလာခံကြီး ကျင်းပပေးဖို့
တိုင်းရင်းသားတွေက တောင်းဆိုမှု ကို ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း က
လက်ခံ ဆွေးနွေးကြမယ် ဆိုပြီး ပြန်လည် ပြောကြား ခဲ့တယ်လို့ ရှမ်း
တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD ) ပါတီ ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ
ဦးစိုင်းလိတ် က VOA ကို ပြောပြ ပါတယ်။
“၀န်ကြီးကတော့ ထိုကဲ့သို့သော ညီလာခံလို့တော့ မပြောဘူး၊ ပင်လုံလို
ကျယ်ပြန့်တဲ့ အစည်းအဝေး ကြီး တရပ် ကျနော်တို့ ၀ိုင်းပြီး လုပ်ကြတာပေါ့ တဲ့။
ဒီကိစ္စကို ၂၀၁၅ မတိုင်ခင် ဖြစ်နိုင်ရင် ၂၀၁၄ အတွင်းမှာပဲ အပြီး
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးခရီးမှာ
နိုင်ငံရေး အင်အားစုအားလုံး ပါဝင်လာရေး ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်း ၀န်ကြီး
ဦးအောင်မင်း က ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ဦးစိုင်းလိတ် က ဆိုပါတယ်။
“ဦးအောင်မင်း အဓိက ဆွေးနွေးတာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ
ရေရှည်တည်တံ့သွားဖို့၊ နောက် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေး မှာ အားလုံး
၀င်ပါနိုင်ဖို့ ၊ ဒါကို သူတို့ အဓိကထားပြီး လုပ်နေတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့လို့
သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေရော၊ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေရော၊ တခြား
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း၊ လက်နက်ကိုင် အပစ်ရပ်စဲထားတဲ့ အဖွဲ့တွေ အပါ၊
နောက် ပြည်သူ တွေ လေးစား ကြည်ညိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရော၊ အဖွဲ့အစည်းတွေရော
အလွှာစုံ ပါနိုင်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းနေတယ်ပေါ့”
မြန်မာနိုင်ငံဒေသ အသီးသီး ရှိကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ ဘာသာစကားတွေ
ပြန်လည် သင်ကြားပေးဖို့ကို တိုင်းရင်းသားတွေက တောင်းဆိုမှုကိုလည်း
သမ္မတကြီးဆီအထိ တင်ပြပေး သွားမယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောသွားတယ်လို့
တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောပြ ပါတယ်။
“တိုင်းရင်းသား ဘာသာ စာပေတွေကို သင်ကြားခွင့်ပြုဖို့ပေါ့။ ပြည်နယ်ကို
အခြေခံပြီး တိုင်းရင်းသား ဘာသာတွေကို သင်ကြားခွင့်ပြုပါ၊ တခြားသော
တိုင်းရင်းသားငယ်တွေကိုလည်းပဲ အပိုဘာသာရပ် အနေနဲ့ သူတို့ စိတ်ကြိုက် ဘာသာ
အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းပေးပါ ဆိုတာမျိုးကို တောင်းဆိုတယ်။ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း နဲ့
၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်း တို့က သဘောတူ လက်ခံတယ်၊ ကျေနပ်ပါတယ်၊ ဖြစ်သင့်ပါ တယ်
တဲ့။ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြတာပေါ့ .. ခင်ဗျားတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့
ပုံစံမျိုးကို ရေးပေးလိုက်ကြပါ.. သမ္မတကြီး ဆီကို တင်ပြပေးမယ်.. ခင်ဗျားတို့
သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ခွင့်ရအောင်လည်း ကြိုးစားပေး မယ်၊ တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်း
ရေးတဲ့အတိုင်း ပြောကြပါ.. သူတို့လည်း ထပ်ပြီးတော့ ပြောပေးမယ် လို့
ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့ကလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဟာ
ဒီမိုကရက်တစ်မိတ်ဆွေ ၁၀ ပါတီ နဲ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုလို
၁၉၉၀ ရွေးကာက်ပွဲမှာ အနိင်ရခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေအပါအ၀င် အခြားသော
နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်မယ် ဆိုရင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ နဲ့
နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ ဆုံမှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗွီအိုအေ – မြန်မာပိုင်း
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:19 PM No comments:
ပေးပို့ သူ ကိုမင်းကျော်ခိုင်
by Min Kyaw Khine on Wednesday, July 25, 2012 at 12:15pm ·
ဂျာနယ်လစ်ဆိုတာ လူမှုအသိုက်အဝန်း၏ ဘယ်ကဏ္ဍမှာမဆို အရေးကြီးသောအလုပ်ကို ဆောင်ရွက်နေသူ တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်နေပါတယ်။ ဂျာနယ်လစ်အများစုသည် လူအများလိုအပ်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ သတင်း အချက်အလက်များကို ပေးကြသည်။ လူအများသိလိုသည့် သိထိုက်သည့် သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာရဲ့ အကြောင်းတွေကို လူထုရှေ့မှောက်ရောက်အောင် ဆောင်ကျဉ်းပေးကြသည်။ ၄င်းသတင်းအချက်အလက်များမှ ပြည်သူတွေဟာ မိမိတို့ဘဝမှာ ဘာတွေလုပ်ချင်လဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အချို့သတင်း အချက်အလက်တွေဟာ လူတွေရဲ့ သေရေးရှင်ရေးနှင့် ပတ်သက်နေသည်များကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ အရေးကြီးသော (Journalism) ကဏ္ဍတစ်ရပ်အား လူငယ်များ အတွက် သင်တန်းတစ်ရပ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် (၂ဝ) ရက်နေ့မှစ၍ (၂၂) ရက်နေ့အထိ Journalism & Citizen Journialism သင်တန်းအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်၌ အလင်းဆက်(IR) မှ နံနက် (၉းဝဝ) နာရီမှ ညနေ (၅းဝဝ) အထိ (၃) ရက်ကြာ ရက်တို သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ယင်းသင်တန်းတွင် အသင်းသူ/သားများအဖြစ် နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ သင်တန်းသား/သူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ Citizen Journalism အား စိတ်ပါဝင်စား၍ လာရောက် တက်ရောက်သင်ကြားကြသူများ၊ ဂျာနယ်လစ်များ စသဖြင့် သင်တန်းသား/သူ (၂၈)ဦး တို့ တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့သည်။ သင်တန်းဆရာများအနေဖြင့် အလင်းဆက်(IR)၊ နီအဲဝိုင် (Mosa)မှ သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။
Journalism & Citizen Journialism သင်တန်းအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ရာတွင် ပြည်ပနိုင်ငံသို့သွားရောက်စဉ်က ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ (လက်နှစ်ဖက် မရှိသူ) တစ်ဦးသည် မိမိတို့ကျင်းပသော လူမှုရေးလုပ်ဆောင်ချက် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကာ မိမိအား သူကိုယ်တိုင် ရေးစပ်ထားသော ကဗျာနှင့် ဒီဇိုင်းပုံအား ပေးခဲ့ရာ ထိုသူသည် သူကိုယ်တိုင်ရေးဖွဲ့ စပ်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရခဲ့ပါသည်။ ယင်းကဗျာ စာသားနှင့် ဒီဇိုင်းပုံတို့သည် အလွန်ပင် ထူးခြား သပ်ရပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထိုသူသည် သူ၏ ခြေနှစ်ဖက်ဖြင့် ကွန်ပြူတာအား အသုံးပြုကိုင်စွဲကာ အကျိုးပြု စာ၊ ကဗျာများအား ရေးသားခဲ့သော လူမှုရေးသူရဲကောင်း Citizen Journalist တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို မိမိ အသိ အမှတ်ပြု ဂုဏ်ယူမိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယခုသင်တန်းတက်ရောက်ကြသော ညီအစ်ကို မောင်နှမများသည် ကိုယ် အင်္ဂါသန်စွမ်းမှုများရှိနေသောကြောင့် မိမိတို့၏ သန်စွမ်းသောကိုယ်အင်္ဂါနှင့် မိမိတို့၏ ထက်မြတ်သော ဦးနှောက်ကို အသုံးပြုကာ အများပြည်သူ အကျိုးရှိစေမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာဖွေရေးသားကြရန် အင်အားတစ်ရပ် အား ပြောကြားခဲ့ကာ သင်တန်းအား အလင်းဆက် (IR)မှ စတင်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ယင်းသင်တန်းတွင် အလင်းဆက်(IR)မှ ဂျာနယ်လစ်ဇင်(Journalism)၊ သတင်းဓါတ်ပုံကောင်းအတွက် အရေးကြီးမှု၊ ဂျာနယ်လစ်ကောင်းတစ်ယောက်၏ အရည်အချင်း၊ ဂျာနယ်လစ်တို့၏ကဏ္ဍ အစရှိသည့် သင်ခန်းစာ တို့ အား သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပြီး၊ နည်းပညာပိုင်းအနေဖြင့် နီအဲဝိုင်(Mosa)မှ Internet နည်းပညာများ၊ Internet Journalism (Blogger)၏ အရေးပါပုံများ၊ Mobile ဖုန်းများ၏ အသုံးဝင်ပုံများစသဖြင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်စေရန် နိုင်ငံသားဂျာနယ်လစ်သင်တန်းအား သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
Journalism & Citizen Journialism သင်တန်းပို့ချပေးခြင်းဖြင့် ရရှိခဲ့သော အတွေးအခေါ်များ၊ အမြင် များအား တုန့်ပြန်ချက် (Feedback)အနေဖြင့် သင်တန်းသား/သူများမှ ပြောကြားခဲ့ကြရာတွင် “မိမိတို့သည် ယခင်က ကွဲလွဲစွာ မသိသေးခဲ့သော ဂျာနယ်လစ်ဇင်နှင့် နိုင်ငံသားဂျာနယ်လစ်ဇင်အား ယခုအခါတွင် ကွဲလွဲစွာ နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံသားဂျာနယ်လစ်ဇင်ဆိုတာ နိုင်ငံသားများအပေါ် အခြေပြုပြီး (သို့) နိုင်ငံ သားများ ကိုယ်တိုင်တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး သတင်းနှင့် သတင်းဖြစ်လောက်သည့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ သတင်းပို့ခြင်း၊ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ဝေဖန်ခြင်းကို ကောင်းစွာနားလည် သဘောပေါက် လာကြောင်း” စသဖြင့် တုန့်ပြန်ချက် (Feedback)များ ကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ် ဘက်သို့ ကူးပြောင်းလာပြီဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသည် ပွင့်လင်းညှင်သာသော လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက် လာစေရန်အတွက် အများပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာစေမည့် Journalism & Citizen Journialism သင်တန်းအား ပို့ချပေးခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် “စုံမှိတ်မြှပ်သေကြမလား ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေကြမလား” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ပြု ကျင့်သုံးကြရမည်ဖြစ်သည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:02 PM No comments:
by Kyaw Thu on Sunday, July 22, 2012 at 9:55pm ·
(Buddha who nurses the sick)
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသည် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သည့် ရဟန်း ရှင်လူ အများပြည်သူတို့အတွက် ဆေးဝါး (အခမဲ့) ကုသပေးနေသကဲ့သို့ မြန်မာပြည် အနယ်နယ် အရပ်ရပ် (ပြည်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း) ဒေသများရှိ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကွန်ယက်သဖွယ် တတ်စွမ်းသ၍ လက်ဆင့်ကမ်း ကုသိုလ်ကောင်းမှု များကို ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိသည်။
၂၅.၄.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် စတင်၍ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပဲခူး)သည် နာမကျန်းဖြစ်နေသော အများပြည်သူ ရဟန်းရှင်လူတို့အား ဆေးဝါးကုသမှုကို စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ရာမှ ယနေ့ ၂၂.၇.၂ဝ၁၂ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် (၈း၃ဝ) နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးမြို့၊ ဒက္ခိဏသာခါရာမကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်းတွင် “သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပဲခူး)” ဟူ၍ ပဲခူးမြို့ရှိ ဆရာဝန်ကြီးများ၊ အလှူရှင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ သူနာပြု များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျန်းမာရေးကုသမှုဖွင့်ပွဲအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အခမ်းအနားတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး ပဲခူးမြို့မှ ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာ နီနီအေး တို့မှ ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေး ခဲ့သည်။ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် အများပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးအား ယခုကဲ့သို့ ဝိုင်းဝန်းကူညီ လှူဒါန်းကုသမှုများ ပြုလုပ်ပေးကြသော အလှူရှင်များ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆရာဝန် ကြီးများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ ဇွန်ပန်းရုံအောက်တွင် လှည်းဘီးနစ်နေသည်။ ကူ၍တွန်းကြပါ ဟု ဆိုစကားရှိသော်လည်း ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဝိုင်းဝန်းတွန်းကြပါက လှည်းဘီးသည် နစ်သည်ထက် နစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဦးတည်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်လားရာ တစ်ဘက်တည်းသို့ ဝိုင်းဝန်းညီညွှတ်စွာ တွန်းကြပါမှ မိမိတို့ လိုရာပန်းတိုင်သို့ ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြွရောက်လာကြသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ များအား အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး ပဲခူးမြို့မှ ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာ နီနီအေး မှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ရောဂါဝေဒနာရှင်များအား ကုသ ပေးရင်းနှင့် တပြိုင်နက်တည်း ထိုရောဂါအသီးသီးတို့အား မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်နည်း၊ ဂရုစိုက်နည်း ပညာပေးမှုများကို ပြုလုပ်သွားပါက အများပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုမိုထိရောက်မည်ဖြစ် ကြောင်းဟူ၍ အဖိုးတန်စကားရပ်အား ချီးမြှင့်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း (ပဲခူး)အတွက် လှူဒါန်းထားသော အလှူရှင်များအား ဂုဏ်ပြုလွှာများ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးနောက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်မှ ကျေးဇူးတင် စကားပြောကြားရာတွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်၌ ရဟန္တာတစ်ပါး၏ဖြစ်ရပ်အား သာဓကအဖြစ် ပြောကြားခဲ့ရာ တစ်ပါးသူအား မနာလိုဝန်တိုစိတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဝဋ်ကြွေးကြောင့် ဘဝတိုင်း ဘဝတိုင်း အပယ်ဘုံသို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီးနောက် လူ့ဘဝသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်တွင်လည်း ထိုသူ၏ အကုသိုလ် အကျိုးဆက်သည် သူ၏ အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသော အိမ်ခြေတစ်ထောင်ခန့်အထိ ရိုက်ခတ်ခြင်း ကို ခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အကုသိုလ်အကျိုးဆက်သည် အိမ်ခြေတစ်ထောင်အထိ ရိုက်ခတ်ခံခဲ့ရသကဲ့သို့ ကုသိုလ်အကျိုး ဆက်သည်လည်း အိမ်ခြေတစ်ထောင်အထိ ခံစားနိုင်ပါကြောင်း သာဓကအဖြစ် ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပထမဦးဆုံးသော ခြေလှမ်းအဖြစ် ယခုကဲ့သို့ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးမြို့၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့ များတွင် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ခွဲ)များအား ဖွင့်လှစ်ရခြင်းမှာ ထိုဒေသများတွင် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးဝါး ကုသပေးနိုင်သော ဆရာဝန်ကြီးများရှိခြင်းနှင့် ယင်းမြို့များ၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြို့များ၊ ရွာများအထိ ကျယ်ပြန့်စွာ ကုသမှုကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအပြင် ယခုကဲ့သို့ ကိုယ်ကျိုးမဖက် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ကုသိုလ်ဖြစ်ကုသပေးကြသော ဆရာဝန်ကြီးများ၊ သူနာပြုများ၊ အလှူရှင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ အားလုံးတို့အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပဲခူး)၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသူရိန်ဝင်းမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်း၊ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းအား ဘဏ္ဍာရေးမှူးမှ ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းတို့ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ အခမ်းအနားအား ပထမပိုင်းအစီအစဉ်အဖြစ် ရုပ်သိမ်းခဲ့ ကာ ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များတို့အား သက်သတ်လွတ် သီးစုံထမင်းဖြင့် ဧည့်ခံကျွေး မွေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် အခမ်းအနား ဒုတိယပိုင်းအဖြစ် ကြွရောက်လာကြသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ (၂ဝ) ဖွဲ့ တို့နှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့်အတူ လူမှုရေးနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းအခမ်းအနားတွင် ပဲခူးမြို့တွင် နာရေး ကိစ္စရပ်အား မီးသင်္ဂြိုလ်ခြင်း အခက်အခဲများ၊ ဆေးဝါးကုသရာတွင် ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲများအား ဝိုင်းဝန်းအကြံပေး ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ ယင်း လူမှုရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏ ရလဒ်သည် ပဲခူးမြို့တွင် မီးသင်္ဂြိုလ် စက်အသစ် တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပံ့ပိုး ပေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အပေါ် ဒေသခံ ရဟန်းရှင်လူ မိဘပြည်သူအပေါင်းတို့မှ သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ဟု အနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုလိုက်သံသည် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပဲခူး) တည်ရှိရာ ဒက္ခိဏသာခါ ရာမကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်း မြည်ဟီးသွားခဲ့ပါတော့သည်။
ဂီလာနပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည် ငါဘုရားအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း မည်ပေ၏ ဟူသော မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဆိုဆုံးမအတိုင်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းများ အနေဖြင့် လူမျိုးဘာသာ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးတို့အား (အခမဲ့) ပြုစုစောင့်ရှောက်ကုသပေးခြင်းသည် သူနာပြုသောဗုဒ္ဓ၏ လမ်းစဉ်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းကြသော ဗြဟ္မစိုရ်ခြေလှမ်းများပင် ဖြစ်တော့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာ့အလင်း မျက်နှာဖုံး သတင်းဓာတ်ပုံတွင် ဖော်ပြ
နေပြည်တော်တွင် လွှတ်တော် တက်ရောက်နေသည့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွင် ဖော်ပြလာပါတယ်။
ယမန်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တက်ရောက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အခုလို လွှတ်တော် သတင်းဓာတ်ပုံအဖြစ် မျက်နှာဖုံးဖော်ပြချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥရောပ ခရီးစဉ်တုန်းက ကမ္ဘာ့ မီဒီယာတွေက မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖော်ပြနေချိန်မှာ
နိုင်ငံပိုင် မြန်မာသတင်းစာတွေက ဖော်ပြဖို့အရေး ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန အရာရှိကြီး တဦးက သာမန် ပုဂ္ဂလိက ခရီးစဉ်ဖြစ်လို့ မဖော်ပြကြောင်းဆိုပြီး မကြာခင် အစိုးရ အရာရှိများဆွေးနွေးပွဲ သတင်းဖော်ပြရာမှာ
တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမည်ကို သတင်းထဲတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။
အခုတော့ ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်တော် သတင်း
နဲ့ တွဲဖက်ပြီးမျက်နှာဖုံးမှာ ဖော်ပြလာတာဟာ ထူးခြားမှု တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်း လွှတ်တော် တက်ရောက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အခု ဘာကော်မတီ၊ ညာ ကော်မတီ များရဲ့ ဥက္ကဌ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းချက်တွေလည်း တဖွဲဖွဲ လာရောက်နေတယ်လို့ နီးစပ်သူများ အဆို အရ သိရပါတယ်။
ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကော်မတီ ဥက္ကဌ ရာထူးတွေ အပ်နှင်းနေကြတာကိုတော့ သဲသဲ ကွဲကွဲ မသိနိုင်ပါ ဘူး။
တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၏ သမ္မတကြီးက အစ်ကိုဖြစ်သူ၏လုပ်ရပ်ကြောင့် ပြည်သူထံ ဦးညွတ်တောင်းပန်ခဲ့
24/7/2012 နေ့က တောင်ကိုးရီးယား သမ္မတသည် ပြည်သူထံ မိန့်ခွန်းပြောကြားသော အစီအစဉ်မှ တောင်ကိုးရီးယား ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးထံ မိမိအစ်ကိုဖြစ်သူ၏ လဘ်ပေးလဘ်ယူ ကိစ္စအပေါ် ဦးညွတ်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုစွပ်စွဲခံရမှုတွင် အစ်ကိုဖြစ်သူနဲ့အတူ နီးစပ်သူများလည်း ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။
အဖြူရောင်နှလုံးသား ပိုင်ရှင် ( သို့ )ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အမေ့အကြောင်းကိုနှစ်သက် သဘောကျ လို့ ရေးချင်တာပါ..ဒါပေမယ့် သေသေချာချာ့ အမေစု ရဲ့အကြောင်းကိုခရေစေ့ အတွင်းကျကျသိမှသိပါ့မလားလို့ု စိုးရိမ်နေမိတာအမှန်ပါဘဲ ..
အမေစုကို ဘာကြောင့် ကျနော်တို့တွေ အရမ်းလေးစားကြသလဲ?
အမေစု ကို ဘာကြောင့် ပြည်သူ့ လူထုရဲ့ အမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် သတ်မှတ်သဘောထားနေကြသလဲ?
အမေစုကိုဘာကြောင့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်လိုကြတာလဲ ဒီလိုတွေ မေးလာခဲ့ရင် အရင်က တော်တော်ဖြေရလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။အခုတော့ ကျွန်တော်လည်းသိနေပါပြီ ပြည်သူတွေကလဲ သိပြီး ပါးရည်နားးရည်ပြည့်ဝနေပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အရင်ကနဲ့ မတူ ပြည်သူတွေကလည်း အားလုံးကို ရင်ကော့ခေါင်းမော့ကာ ပြန်ပြောနိုင်ပေပြီ။
အမေက ပြည်သူတွေ အားကိုးအားထိုက်လောက်တဲ့ လမ်းပြကြယ် ဟု ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါပြီ။
မနေ့ က အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ပါပြီ .. ယခုလည်း ဒီမိုကရေစီ လမ်းမပေါ်ကိုိ ရောက်နေပါပြီ မနက်ဖြန်ဆိုတာတွေးရခက်ပါသည် ဒီမိုကရေစီခေတ် လို့ ပြောလို့ မရသေးပါ. အမှန်တော့ ဒီမိုကရေစီ လည်းမရသေး ပါ ။ ဒီမိုကရေစီခေတ်ဆိုသည်မှာလွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောစည်းရုံးခွင့် စသည်ဖြင့် ရှိနေရပါမည်။ ယခင် ကနှင့်နှိုင်ယှဉ်ပါက ယခုတော့ သင့်ပါတယ်ဟုခေါ်ရမလိုပါဘဲ။ယခုတော့နိုင်င်ငံရေးကို ပါးနပ်လိမ္မာစွာ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းကျကျ ပြုလုပ်ရတော့မည်ဖြစ်၏။
အမေစု က နှစ်ပေါင်းများစွာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်နှင့် နေထိုင်ခဲ့ရပါလျက်
ယနေ့ခေတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရုံသာမက သူများထက် လက်တလုံးခြားရှေ့က ပြေးနေသည်ကို အားကျ အတုယူစဖွယ်မြင်တွေ့ နိုင်ပါသည်။
အမေ့ရဲ့ပြတ်သားလှတဲ့ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာအရေး ကလည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်က ဒိုင်ပွဲရပ်နဲ့အဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့တာ ကမ္ဘာက လေးစားခဲ့ရပါတယ်။တစ်ခါမှ မမြင်ခဲ့ဘူးမတွေ့ ခဲ့ဖူးတဲ့ ဥရောပ နော်ဝေးနိုင်ငံမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး မ်ိန့် ခွန်းတွေ ၊ နိုဗယ်ဆု ကို ကိုယ်တိုင်ယူပြီး မြန်မာပြည်အတွက် ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ၊ ဆွစ်ဇာလန်မှာလည်းပြည်သူလူထုအား တန်ဘိုးရှိသော မိန့် ခွန်းများဖြင့် လမ်းညွှန်ခေါင်းဆောင်မှု က မြန်မာပြည်ကို ကမ္ဘာက ပိုိပြီးသိခဲ့ရပါပြီ ။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို လေ့လာဖို့ အချိန် နည်းနည်းလေးတော့ ယူရပေဦးမည်။ လက်ရှိ အနေအထား က ခပ်ပါးပါးလေးလျှောက်နေကြရတာ တိုးတက်မှုနှေးကွေးနေသလားလို့ ထင်မိပါတယ်။အမေစုက
အချိန်နေရာမရွေးပဲ သူလုပ်ရမည့်လမ်းစဉ်ကို အပြတ်အသားချမှတ်နိုင်သူ လို့ ယူဆနေရပါတယ်။သူ့အပြုံးများ၊
ဖြူစင် ဖြောင့်ဖြူးသော သူ့ခြေလှမ်းများအားကြည့်ကာခေါင်းဆောင်ပီသ သူ
ဟု ဆိုချင်ပါတယ်...ယနေ့မီဒီယာများ ကလည်းအမေစု သတင်းကို ချက်ခြင်းဆိုသလို ထိတွေ့မှုများ ပိုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်စုက
ပြည်သူအများစု၏ စနစ်ဆိုးဘ၀မှ လွတ်မြောက်မှုသာ အဓိကဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်အမေစုကို ပြည်သူတွေက မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်ကာချစ်ခင်အားကိုး မြတ်နိုးကြခြင်းသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
မည်။မြန်မာပြည်မြေပြင်ပေါ်မှာ လူသားများထဲတွင် စွန့် လွှတ်ခြင်း အနစ်နာခံခြင်း`သတ္တိ´နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုကို တုနှိုင်းမရအောင်
ကျနော့်အား မေးလာပါက အမေစု အား လက်ညှိုးထိုး ညွှန်ပြမိတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။အမြဲဘဲ မှန်နေတဲ့အမှန်တရားအတွက်
အမေ ဟာ ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမှကင်းဝေးရေး၊မေတ္တာ၊
နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းလူသားဆန်မှု၊ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရနှင့်
လူသားအားလုံးရဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုကို ကိုင်စွဲထားနိုင်တဲ့သူ..ပြီးတော့ အဖြူရောင်နှလုံးသား ပိုင်ရှင် လို့ဒီအတိုင်းဘဲ ရေးလိုက်မိပါတယ် ..။
စာဖတ်သူများအားလုံး စိတ်နှလုံး ဘ၀င်ရွှင်ပြုံးကြပါစေ..။
ဆားဖားဒေါက်တာ ခင်ရွှေမှလယ်ယာမြေများကိုလယ်သမားများ အားပြန်လည်ပေးရန်မဖြစ်ကြောင်းလွှတ်တော်တွင်ပြောကြားသည်ကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)မှ ဒေါက်တာတုခင်ရွှေကလယ်ယာမြေကိုစက်မှုဇုံစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် ၈၀ရာခိုင်နှုန်းပြီးနေ၍ လယ်သမားများကို ပြန်ပေးရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ လယ်သမားများသည် တစုံတဦး.........တဖွဲ့ဖွဲ့နှင့် ပြည်ပ/ပြည်တွင်းမီဒီယာများ၏ သွေးထိုးမြှောက်ပင့်မှုကြောင့် လယ်ယာမြေများပြန်တောင်းဆိုကြောင်း.......
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:58 AM No comments:
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်
ရပ်ကွက်မှတဆင့်... မြို့ နယ်
ဲမြို့ နယ်မှတဆင့်... တိုင်းနှင့်ပြည်..
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:54 AM No comments: